Idiot manimba ny Apple Watch Edition $ 10.000 | Avy amin'ny mac aho
Idiot dia manimba ny Apple Watch Edition $ 10.000 tsy misy antony [Video]
Natolotra tamin'ity horonan-tsary ity sy ny youtuber ny ady hevitra, techrax dia YouTuber, miaraka amina mpankafy fanimbana fitaovana lafo vidy, indrindra ireo izay manana fango an'ny Apple. Ny fotoana farany nandrenesanay azy dia ny nanamarinany ny hamafin'ny Apple Watch Sport.
Ao amin'ny horonan-tsary napetrakay aorian'ny nanohizanao namaky, TechRax manorotoro a Apple Watch Edition de $10.000, eny, efa namaky tsara ianao 10.000 $!, miaraka amina mpivady andriamby neodymium. Torotoro miaraka amin'ny sasany Hery 600 pounds, lojika rava, fa na izany aza toa manohy miasa ihany.
El Apple Watch Edition, Izany dia 38mm y Volamena karat 18, izay manome $ 10.000 ny vidiny. Raha TechRax no mahazo ny volany manangona fomba fijery ao amin'ny YouTube, ilay vlogger Okrainiana monina any Etazonia dia mety tsy afaka mahazo vola ampy esory ny vola nanambola tamin'ny Apple Watch Edition.
Ny fanontaniana dia,Misy dikany ve ny fanaovana ireo karazana horonantsary ireo?. Ny vola azonao amin'ny fitsidihana dia tsy haverinao. Izaho manokana dia mieritreritra fa tsy misy dikany ny horonantsary an'ity karazana ity, raha ambonin'izay dia mieritreritra ny fahantrana, Heveriko fa faniratsirana izany. Ny Apple Watch Edition dia natao tsy ho an'ny olona manankarena, fa ho an'ny miliardera, raha etsy ambony dia ny manapotika azy, ho ahy dia a fanalam-baraka tanteraka.
Manaraka izany, avelanay ho anao ny horonantsary namaky ny efijery do Apple Watch Sport Manga manga 42mm. Betsaka koa ny horonan-tsary momba azy, ohatra, anaovany a iPhone 6, andrahoina ao anaty Coca-Cola.
Ahoana ny hevitrao momba ilay youtuber sy ny lahatsariny?. Tanteraka ny fifanolanana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Idiot dia manimba ny Apple Watch Edition $ 10.000 tsy misy antony [Video]
Toa tsy mitombina amiko ny vidin'ity fitaovana ity, fa mihoatra noho ny fanariana olona 10000 XNUMX dôlara aza, afaka mampiasa azy ireo amin'ny zavatra hafa, manampy ny mpiray tanindrazana aminy ohatra.
Angamba mitazona ny famantaranandro amin'ny karazana fiantohana sasantsasany aho, ka mieritreritra ianao fa afaka manimba ilay famantaranandro, satria afaka nifamaly tamin'ilay fiantohana ianao fa nisy lozam-pifamoivoizana ary novain'izy ireo izany. Angamba izany no nataony ary izany ihany no fanazavana tonga ao an-tsainao noho ny hadalàna be.
Heveriko fa tsara raha mahavita azy izy, mahafinaritra manokana ny mahita ireo zavatra izay tsy hovidiko mihitsy ary indrindra ny mahita ny endrik'ireo fanboy rehefa manao izany tsara fotsiny izy ireo
Ianao ve mila telefaona ho an'ny Apple Watch? Kapoka, mazava ho azy
Google Chrome dia te-hijoro amin'ny Safari amin'ny OS X amin'ny fanatsarana ny zava-bitany